२१+ उत्तम सबडर्डिट्स तपाईंले अनुसरण गर्नुपर्छ (२०२०) - सूची
जब तपाई रेडडिट देख्नुहुन्छ, 'MEMES' पहिलो कुरा हो जुन तपाईको दिमागमा आउँदछ। यद्यपि यस लेखमा हामी हामी मेम्सका लागि सर्वश्रेष्ठ सबरेडिट मात्र छलफल गर्दैनौं तर केहि सबरेडिडेटहरू पनि छलफल गर्नेछौं जसले तपाईंलाई तपाईंको जीवन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
यो लेख शीर्ष सब्रेडरिट्स हुँदैछ, जुन तपाईले साइन अप गरेपछि पछ्याउन सक्नुहुन्छ। रेडडिट कुनै पनि छलफलको लागि गो-टु साइट भएको छ। २०१ 2013 देखि यसले अत्यधिक लोकप्रियता पाएको छ। साथै, केहि ड्या content सामग्री जुन इन्स्टाग्राम र फेसबुक जस्ता प्लेटफर्महरूमा राख्न सकिदैन रेडडिटमा सेट गरिएको छ, त्यसैले हो, रेडडिट अझै पनि सेन्सर गरिएको छैन। Reddit को सबै भन्दा राम्रो फाइदा हो - पुरस्कार। यदि सदस्यले तपाईंलाई पुरस्कार दिन्छ भने, तपाईं रेडडिट सिक्का कमाउन सक्नुहुनेछ।
यो YouTubers, विज्ञापनदाता, वा प्रसिद्ध व्यक्तिहरू हुनुहोस्; सबैजना रेडडिटमा छन्। म आशा गर्दछु कि तपाईंलाई सब्रेड्रेडिट के हो भनेर थाहा भइसकेको छ, त्यसो भए अनुगमन गर्नका लागि सबब्रेडिट्स सुरूवात गरौं।
केहि रमाईलो र मनोरञ्जनात्मक वेबसाइटहरू हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि हो जाँच गर्नुहोस् १ C कूल रोचक वेबसाइटहरू तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
२०२० मा पछ्याउन २१+ उत्तम सबरेडिटहरूको सूची:
१. r / memes
ठिक छ, तपाईंले यो आउँदै गरेको देख्नु भयो। रेडडिट उत्तम मेम्सहरू फेला पार्न राम्रो ठाउँ हो। काममा लामो दिन पछि, जो आफ्नो दिन बनाउने केहि हास्यपूर्ण मेम्समार्फत स्क्रोल गर्न चाहँदैन। यो १ most,549,, ०66 ((करीव १ 13 करोड) को सदस्य गणनाको साथ अनुसरण गरिएको सबरडिडेटहरू मध्ये एक हो। सामग्री काफी सभ्य छ र यहाँ र त्यहाँ एक बकवास स्कोर गर्न सक्दछ। यदि तपाइँ यसलाई २test घण्टामा तातो हिसाबले क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ भने पनि, शीर्ष पोष्ट १kkk द्वारा माथि बढाइनेछ, त्यसैले तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि यो उपसमूह कति लोकप्रिय छ।
२. r / dankmemes
धेरै मेम्स r / memes subreddit r / dankmemes मा पोस्ट गरीन्छ; यसैले यो दोस्रो स्थान हो। डार्क कमेडी यो सबरेटेडको कुञ्जी हो। यदि तपाईं ड्याक, अँध्यारो र व्यंग्यमा हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि उत्तम उपड्रेडिट हो। यस सबरेडिटमा सदस्य गणना ,,१1१,6२। (लगभग million मिलियन) हो, र सबैभन्दा तातो पोस्ट स्कोर around 78.० के -k 84 के आसपास, जुन पर्याप्त सभ्य छ। जहाँसम्म, केहि मानिसहरु यो अप्रिय लाग्न सक्छ, त्यसैले यो स्वाद छैन ठीक छ।
R. r / PewdiepieSubmitted
यो यूट्यूब र रेडडिटको बिच सब भन्दा महत्वपूर्ण सहकार्य हो। यूट्यूबको राजा Reddit मा आउँछन्। Pewdiepie 107 मिलियन सदस्यहरु को साथ सबैभन्दा अधिक सदस्यता प्राप्त YouTuber हो। उसको subreddit मा ग्रह मा रमाईलो memes छ। तपाईंले यसलाई पूर्णतया पेउडीपीको तर्फ केन्द्रित फेला पार्न सक्नुहुनेछ, तर यो कारण यो हो कि उसले सबरेटेड खोलेको हो। तिनीहरूसँग फ्यान आर्ट्स र अन्य सामग्रीहरू छन् सबड्रेडिट रोचक राख्नको लागि। सदस्य गणना 3,,334,,49।। (करीव million लाख)
R. r / AntiJokes
यो subreddit लाई प्रकाश कमेडी मन परेको मानिसका लागि हो र meme को गहिरा अर्थको बारेमा सोच्न धेरै समय राख्न चाहँदैन। यो dank र अँध्यारो हास्य को बिल्कुल विपरीत हो। यो ठिकै सानो सब्रेडटिट हो र यसमा केही राम्रो हास्य छ। सदस्य गणना २ 24 kk छ। यदि तपाईं एक उपशीर्षक प्रयोग गर्नुहुन्न जसले तपाईंलाई न्याय गर्ने सदस्यहरूको एक विशाल रकम हो, त्यसोभए तपाईंले यो प्रयास गर्नु पर्छ।
R. r / wholesomememes
यदि तपाई भर्खरको मेमे टेम्प्लेट जान्न चाहानुहुन्छ भने यो सबरडिडेट हो। मेम्स सबै प्रकारका शीर्षकहरूसँग सम्बन्धित छन् त्यसैले त्यहाँ कम्तिमा एउटा मेम हुनेछ जुन तपाईबाट बाहिर निकाल्नेछ। यदि तपाईं चित्रहरूमा हुनुहुन्छ भने, सबै मेम्स चित्रहरूका रूपमा प्रतिनिधित्व हुन्छन्। जबकि r / antijokes मा, सबै memes क्याप्शनको रूपमा वर्णन गरिएको छ। समुदाय धेरै विशाल छ, count. count6 ​​मिलियनको सदस्य गणनाको साथ।
R. r / MurusedByWords
तपाईंको साथीहरू, रमाईलो कमब्याकको साथ पोष्ट गर्न चाहनुहुन्छ? यो subreddit जोड्नुहोस्। मर्डर्डबायवार्ड्स मेम्सको रूपमा सबैभन्दा बर्बर जवाफहरूको संग्रह हो। नामले देखाए जस्तै, व्यक्ति द्रुत गतिमा दगुर्नु पर्छ र तातो हुनुलाई शान्त पार्न बर्न-आउट गर्नु पर्छ। यस उपसमितिको सदस्य गणना २. 2.07 मिलियन हो।
R. r / बिरालाहरू
कुन subreddit सूची बिराला memes बिना पूर्ण छ ?. बिरालाहरू मनमोहक प्राणीहरू हुन्, र तिनीहरूमा मेम्सहरू हेर्न यो मूल्यवान छ। यस सबरेटेडमा बिरालाहरूका सबै राम्रा चित्रहरू छन् जुन तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। GIFs र भिडियोहरू त्यहाँ छन् तपाईंलाई निल्नको लागि। त्यसोभए पछाडि बस्नुहोस् र केही बिराला मेम्स हेरेर आराम गर्नुहोस्। यस सबरेटेडमा सदस्य गणना २4 लाख छ।
R. r / गेमि।
यदि तपाईं एक खेलाडी हुनुहुन्छ र समाचार जम्मा गर्न र मद्दतको लागि सोध्न गाह्रो लाग्छ भने, यो तपाईंको लागि उत्तम उपड्रेडिट हो। नयाँ सुरूवातहरू, नयाँ खेलहरू, वर्णनहरू, र मेमेहरू सबै यस subreddit मा कभर छन्। समुदाय एकदम विशाल र सहयोगी छ, सबै खेलाडीहरू जस्तै। सदस्य गणना २ 28,566,, 3535 ((२.5..5 मिलियन) हो। यसले सदस्य गणनाको सर्तमा हाम्रो सूचिमा धेरै जसो सबर्रेडिटहरू पिट्दछ। कन्सोलको अर्को पुस्ता आउँदा, तपाईंले पूर्ण लाइनअप र उनीहरू समर्थन गर्ने खेलहरू जाँच गर्नुपर्नेछ। जब तपाईं यो उप-सदस्यतामा सामिल हुनुहुनेछ, तपाईं भर्खरको समाचार र खेल सुरूवातमा अपडेट हुनुहुनेछ, त्यसैले निश्चित रूपमा एक जाँच गर्न।
R. r / pcmasterrace
नामबाट, तपाईंले पहिल्यै अनुमान गरिसक्नु भएको हुन सक्छ कि यो सबरेडिडेट त्यहाँ सबै पीसी गेमरहरूलाई समर्पित छ। हामी सबैलाई थाहा छ, पीसी बनाउनु भनेको केकको टुक्रा होईन। यो सबरेटेड ले तपाईंलाई सबै भर्खरका कम्पोनेन्टहरू र कसरी उनीहरूलाई भेला पार्ने सम्बन्धमा सम्पर्क राख्न मद्दत गर्दछ। यसले फोरमको रूपमा कार्य गर्दछ जहाँ तपाईं आफ्नो निर्माणको लागि उत्तम विवरणहरू पाउनुहुनेछ। तपाईको सहयोगको लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको पीसी सही ढ correctly्गले काम गर्दैन भने। तपाइँलाई कम्पनीहरु द्वारा गरिएको giveaways को बारे मा पनि सूचित गरिनेछ। जब तपाईं सामेल हुनुहुनेछ, तपाईं फेरि कन्सोल किलर पीसीको बारेमा सुन्नुहुनेछ, जुन समान स्तरमा तर कम लागतमा खेल गर्न सक्षम हुनेछ।
R. r / PS4
प्लेस्टेशन बहिष्करण र भर्खरै सुरू गरिएको शीर्षकहरूमा सबै अद्यावधिकहरूका लागि, तपाइँले यो उप-अनुकरणमा समावेश हुनुहोस्। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, प्लेस्टेशनले यसको प्लेस्टेशन प्लस प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रत्येक महिना दुई निःशुल्क खेलहरू खेल्दछ। यसले केही रमाईलो रिलेटेबल मेम्सहरू पनि पाउनेछ, जुन केवल PS4 प्रयोगकर्ताहरू प्लेस्टेशन स्टोरमा पुग्नु अघि कुन खेलहरू खाली छन् भनेर हेर्न सक्षम हुनेछन्। सम्झौताहरू यो सबरेटेडमा पनि बढुवा हुन्छन्; तपाईं तुरून्त अपडेट हुनुहुनेछ जब कालो फ्राइडे सेल र हेलोवीन बिक्री जस्ता विशाल बिक्री भइरहेको छ। सदस्य गणना 3,,80०7,499। (Million मिलियन) हो। यो r / pcmasterrace जस्तै समान छ, तर यो कन्सोलहरूको लागि हो।
R. r / XBOX
XBOX फ्यानहरू चिन्ता नलिनुहोस् कि हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं। नयाँ खेलहरू, समीक्षाहरू, र कन्सोलहरूमा सबै भर्खरको जानकारी यो सबरेटेडमा अवस्थित छ। खेल को बारे मा पनि जानकारी अन्तिम पास, तपाइँ पहिले नै थाहा पाउनुहुनेछ कुन खेल नि: शुल्क हुनेछ। सबै बिक्री मितिहरू र विशेष विज्ञप्तिहरू यस सबरेटेडमा पनि छलफल गरिएको छ। यदि तपाईंको Xbox ले केही त्रुटिहरू देखाउँदै छ भने, समुदायले तपाईंलाई कभर गरेको छ। सदस्य गणना २२5,852२ (२२5 के) हो। सबैजना यहाँ प्रशंसक छन् र Xbox तिर जबरजस्त समर्थन प्रदान गर्दछ।
R। R / FortNiteBR
तपाईंले यो सही सुन्नुभयो! सब भन्दा राम्रो रेटेड लडाई रोयाल subreddit मा छ। यहाँ व्यक्तिहरू नयाँ सत्रहरूमा छलफल गर्दछन्, र भर्खरको युद्धले सबै विशेष बन्डलहरू पार गर्दछ, र अधिक। कहानीलाई खेल मा पछ्याउन धेरै चुनौतीपूर्ण छ तर subreddits हैन, यो खेल फाईलहरु मा हेरी मद्दत संग तपाइँको लागि यो डिकोड। तपाईलाई थाहा हुन्छ कि कुन स्किन आईटम शपमा उपलब्ध हुनेछ। उनीहरूले आफ्नो खेल सुधार गर्नका लागि रणनीति र रणनीतिहरू पनि छलफल गर्छन्। सदस्य संख्या १.4 मिलियनको आधारमा सबरेडिटका लागि एकदम ठूलो हुन्छ।
१० r / Minecraft
Minecraft एक उत्तम अनलाइन मल्टिप्लेयर खेल हो। यसको न्यूनतम ग्राफिक्स आवश्यकताहरूको कारण, धेरै खेलाडीहरूले यस खेलको लागि छनौट गर्छन्। यदि तपाइँ Minecraft मन पराउनुहुन्छ र कसरी अन्डर ड्रैगन लाई हराउने मा चासो राख्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा subreddit चेक आउट गर्नुहोस्। यस उपसमितिको सदस्य गणना 4. 4. लाख छ। धेरै ठूलो सही? सबै अधिक कारण यो subreddit मा शामिल हुन।
११ r / warzone
वारजोन २०१ in मा विमोचन भएदेखि खबरमा रहँदै आएको छ। यसले अत्यन्त लोकप्रियता पाएको छ। Months महिनामा, 75 75 करोड खेलाडीहरू ड्युल वारजनको कल खेल्न सामेल भए। यदि तपाईं कल अफ ड्युटी वारजोन मन पराउनुहुन्छ र कहानी र रणनीतिहरूका बारे उत्सुक हुनुहुन्छ भने तपाईंले जाँच गर्नु पर्छ। सदस्यहरू पनि ड्यूटी कारणको मक कल गर्न स्वास्थ्यकर memes बनाउँछ जो को गर्दैन? तपाईं यो उपरेखितको आनन्द लिनुहुनेछ। सदस्य गणना ११२k छ।
१२. r / प्रोग्रामिंग
यदि तपाईं प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि सबरेडिट हो। यो त्रुटिहरू हुनुहोस्, तपाईंको कोडमा बगहरू वा तपाईंको प्रणालीले विशिष्ट कार्यहरू गर्न सक्दैन। तपाइँका सबै जवाफहरू यस सबरेटेडमा जवाफ दिइनेछ। यो पूर्ण रूपमा कोडिंगको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ, त्यसैले अजगर, जाभा डाटा संरचनाहरू, र एल्गोरिदम जस्ता शीर्षकहरू पनि समाहित हुन्छन्। सदस्य गणना यस सबरेटेडमा करीव करीव २० लाख छ। तपाइँले टिप्पणीहरूको माध्यमबाट तपाइँका उत्तरहरू प्राप्त गर्न केहि समयको लागि कुर्नु पर्ने हुन सक्छ, तर तपाइँ सोच्न सक्नुहुने सबै प्रतीक्षाको लायक छ। साथै, तपाइँ प्रोग्रामरहरू अब पछ्याई रहेका नयाँ प्रवृतिको बारेमा तपाईंलाई राम्ररी जानकारी दिइनेछ।
१.. r / यात्रा
बिभिन्न ठाउँहरू पत्ता लगाउन र उनीहरूको बारेमा जान्न मनपर्छ? ठिक छ, तपाईं यस सबरेटेडमा सामेल हुनुहुनेछ। सबै जानकारीहरू, कसरी कम्युट गर्ने र अन्य ठाउँहरू भ्रमण गर्ने पनि, यो सब्रेडटमा दिइन्छ। व्यक्ति पनी समीक्षा गर्छन् कि उनीहरूलाई विशेष साइट मन पर्यो कि हुँदैन। यो नि: शुल्कका लागि तपाईंको यात्रा मार्गदर्शक हुन सक्छ र तपाईंको सपनाको छुट्टीको योजना बनाउन मद्दत गर्दछ। सदस्य गणना 5,4२१, 6464 ((million मिलियन) हो। यदि तपाईलाई दिमागमा कुनै खास ठाउँ को बारे मा केहि श doubts्का लाग्छ भने, रेडडिटरहरु लाई सोध्नुहोस्, र तिनीहरुले तपाईलाई के सोच्छन् भन्ने बारे जानकारी दिन्छन्।
१.. आर / खाना
यो तपाईं भित्र खाद्यान्न बाहिर ल्याउने समय हो। यो सबरेटेडमा संसारका सबै खालका खाना हुन्छन्। कमेन्ट सेक्सनमा, तपाइँ कसरी खाना बनाउँदछन् रेसिपीहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाई सबै प्रकारका स्नैक्स, खाजा र सबै चीजको लागि डिनर पाउनुहुनेछ। यस उपसमितिको सदस्य गणना २०.०२ मिलियन छ। हप्ताको लागि आफ्नो किराना सामान प्राप्त गर्नुहोस् र सामेल हुनुहोस्।
१.. r / चलचित्रहरू
यस सबरेटेडमा सामेल भएपछि तपाईं उत्कृष्ट फिल्महरू हेर्नुहुनेछ। सबै रेडडिटरहरूले नयाँ फिल्म सुझाव दिन्छ जुन तपाईंको पुस्तकालयको लागि उत्तम हो। तपाईं आफ्नो स्वाद / विधा को बारे मा उनीहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ, र ती तपाईंलाई उत्तम फिल्महरू फेला पार्न मद्दत गर्दछन्। यो मात्र होइन उनीहरूले छलफल पनि गर्छन् कि कुन फिल्म समय र प्रयासको लायक छ। तिनीहरू पनि रिलीज मितिहरू र कास्टको बारेमा समाचारहरू छलफल गर्छन्। यो Reddit भित्र मिनी IMDB जस्तै हो। सदस्य गणना २ 24.१7 मिलियन छ।
१.. r / anime
त्यहाँ सबै एनिमे-प्रेमीहरूको लागि यो तपाईंको लागि सबरेटेड छ। ती दिनहरू गए जब मानिसहरूले एनिमेलाई केवल कार्टुनको रूपमा हेन्थे। यो त्यो भन्दा धेरै भएको छ। तपाईंको मनपर्ने एनिमेसको बारेमा नयाँ समाचार र छलफलहरू। उनीहरूले तपाईंलाई सूचित गर्नेछन् कुन एपिसोड फिलरहरू हुन्। यस उपसमितिको सदस्य गणना १.9। मिलियन छ।
१.. आर / समाचार
सबैजना समाचारमा चासो राख्दैनन्, हामी यसलाई प्राप्त गर्दछौं, तर यसले तपाईको सामान्य ज्ञान बढाउन चोट पुर्‍याउँदैन। यस सबरेटेडमा संसारभरि जानकारी समावेश हुन्छ र विश्वलाई अझ राम्रोसँग चिन्न मद्दत गर्दछ। कागजीविहीन जानुहोस् र यो विश्वव्यापी के साथ के हुँदैछ भनेर पछ्याउन यो उपशीर्षकमा सामेल हुनुहोस्। यस सबरेटेडमा सदस्य गणना २२.२ मिलियन छ। बाईस मिलियन व्यक्ति गलत हुन सक्दैन, र यो उपशीर्षकले नक्कली समाचारलाई समर्थन गर्दैन यदि यो तपाईंको चिन्ता हो भने।
१.. r / nofap
कुराहरु यस सबरेटेडको साथ गम्भीर हुन लागेका छन्। तपाईं नोफ्याप आन्दोलनको बारेमा सचेत हुन सक्नुहुन्छ, जसले हालसालै धेरै लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। यदि तपाईंले नोफ्याप गुजार्ने निर्णय गर्नु भएको छ भने, तपाईं यो सबरेटेडमा सामेल हुनुहुनेछ। योसँग तपाइँको प्रगति ट्र्याक गर्न काउन्टर छ। नोफ्याप आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने तपाईको निर्णयलाई सबै सदस्यहरू धेरै सहयोगी हुनेछन् र तपाईलाई आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सहयोग गर्नेछन्। यस सबरेटेडमा सदस्य गणना 77 77२, २3((2 77२ के) हो। जे होस् सदस्य संख्या कम छ, यो रेडडिटमा सब भन्दा सहयोगी समुदाय हो।
निष्कर्षमा, तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हामीले पोष्टलाई तीन बिभिन्न कोटीहरूमा विभाजन गरेका छौं। मेम्स, जीवनशैली, र गेमि,, तपाईका लागि हाम्रो साइटबाट यी उत्तम सुझावहरू छन्। तपाइँ तपाइँको छनौट अनुसार subreddits मा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। म आशा गर्दछु हाम्रो पोष्ट पढे पछि तपाईलाई पछ्याउनु पर्ने सबरडिडेट्स को लागी विचार भयो। यदि तपाईंसँग यसमा कुनै थप सुझावहरू वा add-ons छन् भने, कृपया हामीलाई कमेन्ट बक्समा तल जानकारी दिनुहोस्।
नेटफ्लिक्सको लागि सर्वश्रेष्ठ VPN
प्राइम भिडियोमा Best० सर्वश्रेष्ठ फिल्महरू
डिज्नी प्लस रोकुमा छ?
२ 25 रोबक्स कसरी पाउने
यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्न र एमपी3मा रूपान्तरण गर्न
nvidia gefor अनुभव केही गलत फिक्स भयो
फिल्म हेर्नुहोस् नि: शुल्क साइन अप
शोटाइम कुनै पनि समय com सक्रिय रोकू कोड
क्रेडिट कार्ड बिना नि: शुल्क महिना नेटफ्लिक्स